Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့် ကျောက်စိမ်းတွင်းတွေအကြောင်း မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ Global Witness အဖွဲ့က ဒီကနေ့ သူတို့မှတ်တမ်းကို ပြသ
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့် ကျောက်စိမ်းတွင်းတွေအကြောင်း မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ Global Witness အဖွဲ့က ဒီကနေ့ သူတို့မှတ်တမ်းကို ပြသ
at 5/18/2017 10:42:00 AM
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့် ကျောက်စိမ်းတွင်းတွေအကြောင်း မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ Global Witness အဖွဲ့က ဒီကနေ့ သူတို့မှတ်တမ်းကို ပြသဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပေမယ့် ခွင့်ပြုချက်မရခဲ့ပါဘူး။ အစိုးရက ပြသခွင့်မပေးတာ မဟုတ်ဘဲ Park Royal Hotel က သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ သာ ပြုလုပ်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းထောက် ကိုအောင်သိင်္ခက တင်ပြထားပါတယ်။
ရိုက်ကူး - အောင်သိင်္ခ၊ သန့်ဇင်ဦး/ RFA
နိုငျငံတျောမှ ခှဲမထှကျရ စကားရပျကို တိုငျးရငျးသားတှ...
၂၅-၅-၂၀၁၇-၂၁ ရာစု ပင်​လုံ ဒုတိယ​နေ့၌ ​ပြောပြချက်​ ...
Hpa Majaw Myen DapaHpyen Madung gaw Kachin rai?
Evidences prove Burmese Tatmadaw is clearly waging...
Shagyi/Yagyi (Millet)aNpawt, Jai Lang Hpang ai J...
1870 Frontier Area Map. Jinghpaw/Singhpo Tribe Ter...
The current political and economic situation in Ka...
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့် ကျောက်စိမ်းတွင်းတွေအကြောင်း မ...
Jade and the Generals
“မြန်မာ့ကျောက်စိမ်းနဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ” မှတ်...
21st Centuray Panlong process must set anew approa...
လန်ဒန်တွင် ဆုလာယူသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ထောက်...